merolagani - नेपाल लाईफको एफपीओमा आबेदन खुल्यो, कहाँ - कहाँबाट भर्न सकिन्छ ?
नेपाल लाईफको एफपीओमा आबेदन खुल्यो, कहाँ - कहाँबाट भर्न सकिन्छ ?
नेपाल लाईफ ईन्स्योरेन्स (NLIC) को थप नयाँ साधारण सेयर अर्थात एफपीओ बिक्री खुला भएको छ । नेपाल लाईफले प्रति कित्ता १४२५ रुपैयाँका दरले ३० लाख ९६ हजार ४ सय २९ कित्ता एफपीओको पुस २७ गतेदेखि बिक्री खुला गरेको हो । कम्पनीको एफपीओमा छिटोमा माघ २ गतेसम्म आवेदन गर्न सकिनेछ ।
कम्पनीले एक सय फेस भ्यालुमा १३२५ रुपैयाँ प्रिमियम थपेर प्रति कित्ता १४२५ रुपैयाँमा एफपीओ निश्काशन गरेको हो ।
कम्पनीको १६ औं बार्षिक साधारण सभाबाट पारित भए बमोजिम संस्थापक र सर्वसाधारण समुहको शेयर स्वामित्व ७०ः३० प्रतिशत कायम गर्न आवश्यक हुने ३० लाख ९६ हजार ४ सय २९ कित्ता थप साधारण शेयर निष्कासन गरेको हो ।
कम्पनीको सेयर निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धकमा सिद्धार्थ क्यापिटल लिमिटेड रहेको छ । लगानीकर्ताले न्युनतम १० कित्ता अर्थात चौध हजार २ सय ५० रुपैयाँ र अधिकतम ३० हजार ९६० कित्ता अर्थात चार करोड ४१ लाख १८ हजार रुपैयाँसम्म आवेदन गर्न पाउनेछन् । लगानीकर्ताले दशको गुणांकमा आवेदन दिनु पर्ने बिक्री प्रबन्धक सिद्धार्थ क्यापिटलले स्पष्ट पारेको छ ।
कहाँबाट आबेदन गर्ने ?
हाल नेपाल लाईफको चुक्ता पूँजी दुई अर्ब १६ करोड रहेकोमा एफपीओ जारीपछि दुई अर्ब ४७ करोड नाघ्ने छ । उसले एफपीओ वापत संकलन गर्ने प्रिमियम जगेडा कोषमा जाने छ ।
साना लगानीकर्ताले ३० कित्तासम्म लगानी गर्दा फाईदाजनक हुनसक्ने आँकलन गरिएको छ भने ठूला लगानीकर्ताको हकमा कति परिमाणमा आबेदन पर्ला भन्ने कुराले सेयर कति पलाई भन्न्े कुरा निर्धारण गर्ने देखिन्छ ।
यसमा १० गुणा आबेदन परेमा ४० अर्ब भन्दा बढी र १५ गुणा आबेदन परेमा ६० अर्ब भन्दा बढी रकम दुई महिनासम्म बन्धक बन्ने भएकाले हाल बजारमा देखिएको तरलता अभावलाई अरु खुम्च्याउने छ ।
यस एफपीओमा आबेदन गर्न राजधानीबासीले अनिबार्य रुपमाा हितग्राही खाता खोलेको हुनुपर्नेछ । माघ १ गतेपछि भने राजधानी बाहिरका लगानीकर्तालाई पनि अनिबार्य रुपमा हितग्राही खाता आबश्यक पर्नेछ ।